तपाइँको सामग्री र्यान्किंग प्राप्त गर्ने २० तरिकाहरू तपाइँको प्रतिस्पर्धी भन्दा राम्रो Martech Zone
यसले मलाई चकित पार्छ कि प्रतिस्पर्धी साइटहरू र पृष्ठहरू नहेर्दा कडा मेहनत गर्ने कम्पनीहरूले सामग्री रणनीतिमा राख्दछन्। मेरो मतलब व्यवसाय प्रतिस्पर्धी होइन, मेरो अर्थ जैविक खोजी प्रतिस्पर्धी हो। उपकरणको उपयोग जस्तैSemrush, एक कम्पनी सजिलैसँग आफ्नो साइट र प्रतिस्पर्धी साइट बीच प्रतिस्पर्धी विश्लेषण गर्न सक्दछ कुन सर्तले प्रतिस्पर्धीलाई ट्राफिक ड्राइभ गर्दैछ भनेर चिन्नको लागि, यसको सट्टामा, उनीहरूको साइटमा अग्रणी हुनुपर्छ।
जबकि तपाईं धेरै सोच्दै हुन सक्छ ब्याकलिinking्क रणनीति हुनु पर्छ, म असहमत हुनेछ। जबकि ब्याकलिinking्कले छोटो अवधिको लागि उच्च स्तर निर्धारण गर्न सक्छ, समस्या त्यो हो राम्रो सामग्री सधैं लामो दौडमा जित्नेछ। तपाईंको लक्ष्य त्यस्तो सामग्री सिर्जना गर्नु हो जुन प्रतिस्पर्धी साइटले प्रकाशित गरेको भन्दा अनन्त राम्रो हुन्छ। जब तपाईं उनीहरू भन्दा एक राम्रो काम गर्नुहुन्छ, तपाईं गर्नुहुन्छ लिंक कमाउनुहोस् तपाईले कहिले हातैले चलाउन सक्नुहुन्न
घेराबन्दी मिडियाको रस हजन्सको विस्तृत पोस्ट छ २ traffic,०००+ मासिक भ्रमणहरू कसरी वेबसाइट ट्राफिक बढाउने कसरी सामग्री राम्रो रँक गर्ने मा एक इन्फोग्राफिकको साथ। व्यक्तिगत रूपमा, म साइटमा धेरै धेरै आगन्तुकहरू लिने बारेमा त्यति वास्ता राख्दिन किनकि म सदस्यता लिने, फर्कने र रूपान्तरण गर्ने गुणस्तरीय आगन्तुकहरूको बारेमा गर्छु। तर इन्फोग्राफिक सुनको एक नगेट हो किनभने यसले तपाईंको सामग्रीलाई कसरी राम्रो र rank्क गर्ने भनेर स्पेल गर्दछ। यो एक रणनीति हो जुन हामी ग्राहकहरूको साथ हाम्रो सामग्री रणनीतिहरूमा सबै समय तैनात गर्दछौं।
कसरी राम्रो सामग्री र्यान्क गर्ने
पोस्ट स्लग - तपाईंको पोष्ट स्लग सम्पादन गर्नुहोस् र तपाईंको यूआरएल छोटो बनाउनुहोस्। यो URL कसरी हाम्रो डोमेन बाहेक ध्यान दिनुहोस् कसरी-श्रेणी-सामग्री-राम्रो, एक सरल, अविस्मरणीय यूआरएल जुन खोज इञ्जिन प्रयोगकर्ताहरू क्लिक गर्न र साझेदारी गर्न अधिक योग्य हुनेछन्।
सामग्री प्रकार - अडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, अन्तर्क्रियात्मक सामग्री, भिडियो ... केहि गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँको सामग्री बाहिर खडा र सजिलै सेयर गर्न योग्य बनाउँछ अधिक ध्यान कमाउन गइरहेको छ। यो हो हामी किन माया र विकास गर्छौं माइक्रो-ग्राफिक्स सामाजिक मीडिया को लागी आकार।
पृष्ठ शीर्षक - कुञ्जी शब्दहरूको उपयोग महत्त्वपूर्ण छ, तर क्लिक गर्न लायक शीर्षक सिर्जना गर्नु ठूलो रणनीति हो। हामी प्राय: पृष्ठ शीर्षक प्रकाशित गर्दछौं जुन लेख शीर्षक भन्दा फरक छ, विशेष गरी खोजीको लागि अनुकूलित। यद्यपि प्रासंगिक छैनन् भन्ने शीर्षकको साथ कृपया खोज प्रयोक्ताहरूलाई प्रलोभन नदिनुहोस्। तपाइँ तपाइँको आगंतुकहरु संग विश्वसनीयता गुमाउनु हुनेछ।
सरल लेखन - हामी यथासम्भव जटिल शब्दावली र उद्योग संक्षिप्त शब्दहरूलाई बेवास्ता गर्छौं - जबसम्म हामी परिभाषा र विवरणहरू समावेश गर्दैनौं हाम्रो आगन्तुकहरूलाई मद्दत गर्न। हामी हाम्रो सामग्रीको साथ एक साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त गर्न कोशिस गरिरहेका छैनौं, हामी जटिल विषयवस्तुहरू बुझ्नको लागि सरल बनाउन कोशिस गर्दैछौं। प्रत्येक दर्शकले बुझ्न सक्ने स्तरमा बोल्नु महत्वपूर्ण छ।
पृष्ठ संरचना - सामग्री क्रममा पहिलो बुलेट सूची को समय को 78 XNUMX% थियो। सजिलै स्क्यान गर्न सकिने सेक्सनहरूमा तपाईंको पृष्ठ व्यवस्थित गर्नाले पाठकहरूलाई सजीलो बुझ्न सजिलो हुन्छ। पाठकहरूको सूचि मनपर्दछ किनकि उनीहरू अनुसन्धान गर्दै छन् र सजीलै याद गर्न वा जाँच गर्न सक्छन् तिनीहरूलाई चाहिने चीजहरू वा बेवास्ता गरेको।
पढ्न योग्य फन्टहरू - उपकरणसँग सापेक्ष तपाईंको फन्ट आकार समायोजन गर्न यी दिनहरू महत्त्वपूर्ण छन्। स्क्रीन रिजोलुसनहरू हरेक केहि बर्षहरूमा दोब्बर हुँदै जान्छ, त्यसैले फन्टहरू साना र सानो हुँदै जान्छन्। पाठकहरूको आँखा थाकेको छ, त्यसैले यसलाई सजिलैसँग लिनुहोस् र तपाईंको फन्टहरू ठूलो राख्नुहोस्। पृष्ठ # १ रैंकिंगको लागि औसत फन्ट आकार १.1..15.8px हो
द्रुत लोड टाइम्स - ढिलो लोड समय जस्तो तपाईंको सामग्रीलाई केही पनि मार्दैन। एक टन छन् कारकहरू जसले तपाईंको पृष्ठ गतिलाई प्रभाव पार्दछ, र तपाइँ निरन्तर छिटो र छिटो लोड समयको लागि प्रयत्नशील हुनुपर्दछ।
दृश्यहरू - औसत लेख रैंकिंगको पहिलो पृष्ठ भित्र images छविहरू थिए त्यसैले छविहरू, रेखाचित्रहरू, र चार्टहरू समावेशी जुन आकर्षक र साझेदारी योग्य छन्।
फोटो - हजार अन्य साइटहरूको रूपमा उही स्टक फोटोग्राफी समात्नाले तपाईंलाई अनौंठो सन्देश सिर्जना गर्न मद्दत गर्दैन। जब हामी हाम्रो फोटोग्राफरलाई काम गर्ने कम्पनीहरूसँग शूट गर्न सक्दछौं, हामी पनि तिनीहरूलाई सय लिन सक्छौं वा कार्यालय र भवन वरिपरि शटहरू लिन्छौं। हामी बाध्यकारी फोटोहरू चाहान्छौं जुन ग्राहकलाई उनीहरूका प्रतिस्पर्धीहरूबाट अलग गर्दछ। उच्च गुणस्तरका छविहरूले १२१% बढी सेयरहरू प्राप्त गर्दछ
फ्लोटिंग सेयर बटनहरू - राम्रो सामग्री सिर्जना गर्न पर्याप्त छैन यदि तपाईं यसलाई सामग्री साझा गर्न को लागी सहज छैन भने। हामी यसलाई बायाँ, सुरुमा र सामग्रीको प्रत्येक टुक्राको अन्तमा अनुरूप बटनहरूको साथ सरल बनाउँदछौं। र यो काम गर्दछ!
Infographics - ठूला स्क्रीनहरूले सुन्दर, ठूला छविहरू वा सौन्दर्यपूर्ण मनमोहक इन्फोग्राफिक्सको माग गर्दछ। हामी विस्तृत इन्फोग्राफिक्स उत्पादन गर्दैनौं किनकि उनीहरूलाई अन्य साइटहरूमा साझेदारी गर्न गाह्रो छ। अद्भुत इन्फोग्राफिक्स उत्पादन गर्दै ती अग्लो र अत्यधिक दृश्यले हामीलाई दुबैलाई धेरै आकर्षण गर्न, व्याख्या गर्न, र रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्दछ।
लिंक - धेरै प्रकाशनहरू सबै लागतमा आउटबाउन्ड लिंकहरू वेवास्ता गर्दछन् र म विश्वास गर्दछु कि यो गल्ती हो। सर्वप्रथम, मूल्यवान सामग्रीमा लिंक प्रदान गर्न जुन तपाईंको दर्शकलाई आवश्यक छ उनीहरूको क्युरेटर र विशेषज्ञको रूपमा तपाईंको मूल्य बढाउँदछ। यसले देखाउँदछ कि तपाईंले ध्यान दिनुहोस् र उत्कृष्ट सामग्रीको मूल्यांकन गर्नुभयो। दोस्रो, खोजमा अद्यावधिक गरिएको एल्गोरिदमसँग, हामीले हाम्रो अधिकारमा कुनै स drop्ख्यामा आउटबाउन्ड लिंकहरू देखाएनौं।
सामग्री लम्बाई - हामी शीर्षकमा थप वर्णनात्मक, पौष्टिक लेखहरूको लागि हाम्रा लेखकहरूलाई धक्का दिन्छौं। पाठकलाई स्क्यान गर्नको लागि हामी केही साधारण बुलेट पोइन्टहरूको साथ सुरू गर्न सक्दछौं र पृष्ठहरूलाई सेक्सनहरूमा विभाजन गर्न उपशीर्षकहरू प्रयोग गर्न सक्दछौं। हामी छर्कन्छौं बलियो र जोडदार पाठको ध्यान खिच्न भर ट्याग प्रयोग।
सामाजिक रूपमा साझा गर्नुहोस् - हामी एक पटक मात्र हाम्रो सामग्री साझा गर्दैनौं, हामी हाम्रो सामग्री हाम्रो सामाजिक च्यानलहरूमा धेरै पटक साझा गर्छौं। सामाजिक मिडिया एउटा टिकर जस्तो हो जहाँ मानिसहरूले प्राय: वास्तविक समयमा खोजी गर्दछन्। यदि तपाइँ अनुयायीले ध्यान दिएको समय भन्दा बाहिर लेख प्रकाशित गर्नुभयो भने, तपाइँले त्यसलाई हराउनुभएको छ।
तपाइँको सामग्री पिच गर्नुहोस् - हाम्रो दर्शकहरु को एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो ती व्यक्तिहरु जो हाम्रो साइट मा बारम्बार छैन - तर तिनीहरूले हाम्रो न्यूजलेटर पढेका थिए वा कथाहरूको पिचलाई जवाफ दिएका थिए जुन उनीहरूलाई रमाईलो लाग्यो। न्यूजलेटर वा सार्वजनिक सम्बन्ध फर्म बिना हाम्रा सामग्रीलाई सान्दर्भिक दर्शकहरूमा धकेल्छ, हामी यति धेरै साझा गर्दैनौं। यदि हामी साझा गरीरहेका छैनौं भने, हामीसँग लिंक गरिएको छैन। यदि हामी लि linked्क भइरहेका छैनौं भने हामी रैंकमा जाँदैनौं।
कसरी सामग्री EVEN राम्रो क्रमबद्ध गर्न
हामी यस सूचीलाई मन पराउँछौं, तर केही चीजहरू साझेदारी गर्न चाहन्छौं जुन बेवास्ता गरियो तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण:
लेखक - तपाइँको पृष्ठमा तपाइँको लेखक बायो जोड्नुहोस्। पाठकहरूले लेखहरू खसालेर त्यसलाई साझा गरेझैं तिनीहरू जान्न चाहन्छन् कि विशेषज्ञताको साथ कसैले लेख लेख्यो। लेखकको एक फोटो, र एक जैवको साथ एक लेखकको रूपमा सामग्रीको एक टुक्रा छुट्याउन मिल्दैन किन तिनीहरूलाई सुन्नु पर्छ।
मोबाइल ढाँचाहरू - यदि तपाईंको पृष्ठ सजिलै पढ्न योग्य छैन भने, यो गुगलको द्रुत मोबाइल पृष्ठ (एएमपी) ढाँचाको साथ हुने भएमा, तपाईं सायद मोबाइल खोजीहरूमा श्रेणीकरण गर्न सक्नुहुन्न। र मोबाइल खोज नाटकीय रूपमा वृद्धि मा छन्।
प्राथमिक अनुसन्धान - यदि तपाईंको कम्पनीसँग स्वामित्व उद्योग डेटा छ जुन तपाईंको सम्भावनाहरूको लागि बहुमूल्य हुन सक्छ, यसमार्फत खोल्नुहोस् र सार्वजनिक विश्लेषण प्रदान गर्नुहोस्। प्राथमिक अनुसन्धान एक सुनखाना हो र निरन्तर अनलाइन साझेदारी गरिन्छ। समयमै, तथ्या data्क डाटा उद्योग प्रकाशनहरू, प्रभावकर्ताहरू, र तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूबाट उच्च मागमा छ।
क्युरेट गरिएको माध्यमिक अनुसंधान - यस इन्फोग्राफिकको तल हेर्नुहोस् र तपाईंले फेला पार्नुहुनेछ कि उनीहरूले आफ्नो अनुसन्धान गरेका थिए - प्राथमिक अनुसन्धानका एक दर्जन भन्दा बढी स्रोतहरू खोज्दै जुन पूरा भएको कुराको स्पष्ट छविलाई रंग गर्दछ। कहिलेकाँही केवल सुनलाई बाहिर निकाल्दै र बाहिर पुing्याउँदा तपाईंको सम्भावितहरूले खोजी गरिरहेका सम्पूर्ण जानकारी प्रदान गर्दछ।
पदोन्नति को लागी भुक्तान गर्नुहोस् - भुक्तान गरिएको खोज पदोन्नति, भुक्तान सामाजिक पदोन्नति, सार्वजनिक सम्बन्ध, मूल विज्ञापन ... यी सबै ठोस, लक्षित, लगानीहरू यी दिनहरू छन्। यदि तपाईं उत्कृष्ट सामग्री सिर्जना गर्न को समस्या बाट पार गर्दै हुनुहुन्छ - तपाईं उत्तम यो प्रचार गर्न केहि बजेट बाँकी छ!
टैग: सामग्री लम्बाईफन्ट आकारतस्बिरहरूलिङ्कमार्केटिंग इन्फोग्राफिक्सजैविक खोजजैविक खोज रैंकिंगआउटबाउन्ड लिंकहरूपृष्ठ शीर्षकफोटोपोस्ट स्लगश्रेणीएसईओएसईओ शीर्षकबटन साझेदारी गर्नुहोस्URL
१२ कारकहरू जुन तपाईंको अन्तर्राष्ट्रिय ईमेल रणनीतिलाई असर गर्छन्
अप्रिल 12, 2016 मा 10: 18 PM
वास्तवमा एक महान पोष्ट। मलाई इन्फोग्राफिक मनपर्दछ कि हामीले कसरी उत्पादनको लागि UI सिर्जना गर्नुपर्दछ।
अप्रिल 15, 2016 मा 4: 24 PM
यस लेखलाई माया गर्नुहोस् डौगी! धेरै उपयुक्त जानकारी 🙂
अप्रिल 16, 2016 मा 1: 34 PM
मई 4, 2016 मा 4: 04 PM
अधिकांश अंश आधारभूत, तर वास्तवमै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि। के महत्वपूर्ण छ हामीलाई सम्झाउनु भएकोमा धन्यवाद।
एउटा थप भनेको तपाईंको हेडलाइन्सलाई भावनात्मक बनाउने सम्झना हो। याद गर्नुहोस् तपाईंको लक्षित बजार को हो र भावनात्मक अपीलको साथ तिनीहरूको दुखाइ पोषणहरू सम्बोधन गर्नुहोस्।
मई 4, 2016 मा 9: 13 PM
राम्रो प्रतिक्रिया एनी र म पूर्ण रूपमा सहमत छु! भावनामा ट्याप गर्नु तपाईंको पाठकलाई उत्प्रेरित गर्ने सशक्त माध्यम हो।